တရုတ်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာလီဘန်က အာမခံမယ်ဆိုရင် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ တရုတ်ဘက်က ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုလားနေပါတယ်။ တာလီဘန်ရဲ့ သတင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ယာယီ ဒုတိယ ၀န်ကြီး Zabihullah Mujahid ကတော့ သူ့အစိုးရ အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ကာဘူးလ်မြို့တော်မှာ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Ayesha Tanzeem နဲ့ ရုပ်သံ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုထဲကနေ ကောက်နုတ်ပြီး ဒီသီတင်းပတ် စီးပွားရေး အစီအစဉ်မှာ မသိင်္ဂီထိုက် ပြောပြပေးပါမယ်။
AYESHA TANZEEM: စီးပွားရေး ကိစ္စ လှည့်ရအောင်ပါ။ အာဖဂန်ရဲ့ စီးပွားရေးက သိပ်ပြီးမကောင်းပါဘူး။ စီးပွားရေးကို ကယ်တင်ဖို့ ဘာ အစီအစဉ် ရှိပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: စီးပွားရေး အခြေအနေက ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာနေပါပြီ။ နိုင်ငံ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ကျနော်တို့ စုစည်းထားပြီး ဆက်ပြီး စုစည်းနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနေ်ာတို့ ကုန်သည်တွေလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အဆင်သင့်ပါ။ လမ်း တည်ဆောက်မှု အပါအ၀င် စီမံကိန်းကြီးတွေလည်း လုပ်နေပါပြီ။ သတ္တု တူးဖော်ရေး အတွက် နိုင်ငံ တချို့နဲ့ သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့လည်း နီးစပ်လာပါပြီ။
AYESHA TANZEEM: အမေရိကန်နဲ့ ညှိနှိုင်းမှုကနေ ဘာ မျှော်လင့်ထားပါလဲ။ အမေရိကန်ဘက်က ထ်ိန်းထားတဲ့ ငွေကို မြန်မြန် ဖြေလျှော့ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါသလား၊ အပြန်အလှန် အနေနဲ့ ဘာတွေ ကမ်းလှမ်းလိုပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ထားတာဟာ အာဖဂန်နစ္စတန် ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာ မတရားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ ညှိနေပါတယ်။ အာဖဂန် ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်တာကြောင့် ဒီငွေတွေ ဖြေလျှော့ပေးရေး အတွက် တခြားနိုင်ငံတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ဘဏ်တွေနဲ့လည်း ညှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ အာဖဂန် ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖဂန် လူထုရဲ့ စီးပွားရေး ပြသနာကို ဖြေရှင်းရေး အတွက် ဒီငွေတွေ ဖြေလျှော့ပေးရေးက အရေးကြီးပါတယ်။
AYESHA TANZEEM. အမေရိကန်ဘက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တောင်းဆိုချက်တွေထဲ တခုကတော့ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ကျောင်းတွေ ဖွင့်ဖို့နဲ့ တာလီဘန်ဘကကလည်း အမျိုးသမီးတွေ ပညာရေး အတွက် ကတိပြုထားပါတယ်။ ဒီကျောင်းတွေကိုလည်း သီးခြားခွဲထားပါပြီ။ ဒီကျောင်းတွေ ဘာကြောင့် မဖွင့်တာပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: အခုအချိန်ထိတော့ အမေရိကန်တွေဘက်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တောင်းဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ကြောင်းသာ ပြောထားတာပါ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဒီအခွင့်အရေးတွေကို လေးစားမယ်ဆိုတာကို သူတို့ကို အာမခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ် စည်းမျဉ်းတွေ၊ ဥပဒေတွ အရ သာ ဖြစ်ရပါမယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့ ဒီမူဝါဒကို ချမှတ်နေပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကျောင်းမတက်ရဘူးလို့ ကျနော်တို့ မပြောပါဘူး။ အစီအစဉ် တခု ချမှတ်နိုင်ဖို့ တိုင်ပင်နေပြီး အချိန်တို အတွင်း ဒီကိစ္စဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
AYESHA TANZEEM. ဒီအစီအစဉ်ကို ရှင်းပြလို့ ရမလား။ မိန်းကလေးတွေ အတွက် ပညာရေး အစီအစဉ်လား။ အခု အခြေအနေနဲ့ ဘာများ ကွာခြားသွားမလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: လုပ်နည်း လုပ်ဟန် အပြောင်းအလဲဘဲ ဖြစ်မှာပါ။ ခရီးသွားတာကနေ ကျောင်းသွား၊ အလုပ်သွားတာ အပါအ၀င် အမျိုးသမီးတွေကို ဘယ်လို ဘေးကင်းအောင် ထားမလဲ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး စိတ် ကျေနပ်မှု ရှိစေဖို့ အတွက် ကျောင်းတွေမှာ စိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ဖန်တီးပေးနိုင်ရေး အတွက် အစီအစဉ်ကို လုပ်နေတာပါ။
AYESHA TANZEEM. အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပေးမယ် ဒါပေမယ့် အစ္စလာမ် ဥပဒေ အရ ဖြစ်ရမယ်လုိ့ တာလီဘန်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစ္စလာမ္မစ်ကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်သလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ အာဖဂန် အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ နားမလည်နိုင် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် ကျမ ဒီမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေတာ အစ္စလာမ္မစ် ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါလား။
ZABIHULLAH MUJAHID: အမျိုးသမီးတွေ အတွက် စည်းမျဉ်းတွေ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြမလဲ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူတို့ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားရေး အတွက် သင်ကြားပေးဖို့က အစ္စလာမ္မစ် ဆရာတွေက ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ ဒီကိစ္စကို ဆရာတွေ စုစည်း တိုင်ပင်တာကို ကျနော်တို့ စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အစိုးရကို တင်ပြမှာပါ။
AYESHA TANZEEM: ပညာတတ် အာဖဂန် အများအပြားလည်း နိုင်ငံကနေ ထွက်သွားကြပါပြီ။ နိုင်ငံကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အတွက် အရည်အချင်းပြည့်သူ အလုံအလောက် မရှိဘူးလို့လည်း တချို့က ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စ ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: အထူး ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဌာနတွေမှာ အရည်အသွေးရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခန့်အပ်နိုင်ရေး ကျနော်တို့ ကြိုစားနေပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် ကျန်းမာရေးမှာဆိုရင် ဆရာဝန် တယောက်ကို ၀န်ကြီး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးမှာဆိုရင် ကုန်သည် တယောက်ကို ၀န်ကြီး ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်လည်း ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှာ ပါရဂူဘွဲ့ရ တယောက်ကို ၀န်ကြီးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ တခြား ဌာနတွေ အတွက်လည်း အလားတူ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီဌာနတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေသူ အများစုက အရင်ကတည်းက လုပ်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
AYESHA TANZEEM. အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုလာပြီး ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံရေး တရုတ်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တာလီဘန်တွေ အနေတဲ့ တရုတ်ကို ဘာတွေ လုပ်စေချင်ပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: တရုတ်ဟာ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး အင်အားကောင်းပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ကုန်သွယ်ရေး၊ စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ရေး ကျနော်တို့ ကြိုစားနေပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်ရေး နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုနေပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းရေးမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်တာမျိုးကိုတော့ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
AYESHA TANZEEM: တရုတ် သံတမန်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဘက်က အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ဘာတွေ လိုလားနေပါလဲ။ သူတို့က ဘာတွေ လိုချင်နေပါလဲ။ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ သူတို့ ဘာတွေ လုပ်လိုနေပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: ဒီမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ သူတို့ အလုပ်သမားတွေ အတွက် လုံခြုံရေးကို သူတို့က လိုလားပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံတွင်းက ကဏ္ဍ တချို့မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ သူတို့ စိတ်ဝင်စားနေပြီး အသေးစိတ် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလိုနေပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းတွေထဲက တခုကတော့ Mes Aynak မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်က ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုနေတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ နယ်ပယ်တွေထဲက တခုဖြစ်ပြီး အာဖဂန်နစ္စတန် အတွက်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အတွက် လုံခြုံရေးကို ကျနော်တို့ ကတိပြုထားပါတယ်။
ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ တည်ရှိရာ Mes Aynak သတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်ကတော့ အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ အကြီးဆုံး ကြေးနီ သတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ကွက်တွေထဲက တခု ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံ ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မတူးဖော်ရေးသေးတဲ့ တွင်းထွက် သတ္တု သယံဇာတ တွေ ရှိတယ်လို့လည်း ယူဆထားကြပါတယ်။
အာဖဂနျမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့ တရုတျဘကျက အဆငျသငျ့ (တာလီဘနျ)
တရုတျရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှနေဲ့ အလုပျသမားတှရေဲ့ လုံခွုံရေးကို တာလီဘနျက အာမခံမယျဆိုရငျ အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ တရုတျဘကျက ဒျေါလာ သနျးထောငျခြီ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့ လိုလားနပေါတယျ။ တာလီဘနျရဲ့ သတငျးနဲ့ ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ ယာယီ ဒုတိယ ဝနျကွီး Zabihullah Mujahid ကတော့ သူ့အစိုးရ အနနေဲ့ ဆောငျရှကျဖို့ အဆငျသငျ့ ရှိကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။ ကာဘူးလျမွို့တျောမှာ ဗှီအိုအေ သတငျးထောကျ Ayesha Tanzeem နဲ့ ရုပျသံ တှဆေုံ့မေးမွနျးမှုထဲကနေ ကောကျနုတျပွီး ဒီသီတငျးပတျ စီးပှားရေး အစီအစဉျမှာ မသိင်ျဂီထိုကျ ပွောပွပေးပါမယျ။
AYESHA TANZEEM: စီးပှားရေး ကိစ်စ လှညျ့ရအောငျပါ။ အာဖဂနျရဲ့ စီးပှားရေးက သိပျပွီးမကောငျးပါဘူး။ စီးပှားရေးကို ကယျတငျဖို့ ဘာ အစီအစဉျ ရှိပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: စီးပှားရေး အခွအေနကေ ပုံမှနျ ပွနျဖွဈလာနပေါပွီ။ နိုငျငံ့ အရငျးအမွဈတှကေို ကနြျောတို့ စုစညျးထားပွီး ဆကျပွီး စုစညျးနဆေဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကနျြောတို့ ကုနျသညျတှလေညျး ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့ အဆငျသငျ့ပါ။ လမျး တညျဆောကျမှု အပါအဝငျ စီမံကိနျးကွီးတှလေညျး လုပျနပေါပွီ။ သတ်တု တူးဖျောရေး အတှကျ နိုငျငံ တခြို့နဲ့ သဘောတူ လကျမှတျထိုးနိုငျဖို့လညျး နီးစပျလာပါပွီ။
AYESHA TANZEEM: အမရေိကနျနဲ့ ညှိနှိုငျးမှုကနေ ဘာ မြှျောလငျ့ထားပါလဲ။ အမရေိကနျဘကျက ထိနျးထားတဲ့ ငှကေို မွနျမွနျ ဖွလြှေော့ပေးဖို့ မြှျောလငျ့ပါသလား၊ အပွနျအလှနျ အနနေဲ့ ဘာတှေ ကမျးလှမျးလိုပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: အာဖဂနျနစ်စတနျရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ထိနျးခြုပျထားတာဟာ အာဖဂနျနစ်စတနျ ပွညျသူတှေ အပျေါမှာ မတရားမှု ဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျတှနေဲ့ ကနြျောတို့ ညှိနပေါတယျ။ အာဖဂနျ ပွညျသူတှရေဲ့ ပိုငျဆိုငျမှု ဖွဈတာကွောငျ့ ဒီငှတှေေ ဖွလြှေော့ပေးရေး အတှကျ တခွားနိုငျငံတှေ၊ နိုငျငံတကာ ဘဏျတှနေဲ့လညျး ညှိနပေါတယျ။ ဒါဟာ အာဖဂနျ ပွညျသူတှရေဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးမှု ဖွဈပါတယျ။ အာဖဂနျ လူထုရဲ့ စီးပှားရေး ပွသနာကို ဖွရှေငျးရေး အတှကျ ဒီငှတှေေ ဖွလြှေော့ပေးရေးက အရေးကွီးပါတယျ။
AYESHA TANZEEM. အမရေိကနျဘကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး တောငျးဆိုခကျြတှထေဲ တခုကတော့ မိနျးကလေးတှေ အတှကျ ကြောငျးတှေ ဖှငျ့ဖို့နဲ့ တာလီဘနျဘကကလညျး အမြိုးသမီးတှေ ပညာရေး အတှကျ ကတိပွုထားပါတယျ။ ဒီကြောငျးတှကေိုလညျး သီးခွားခှဲထားပါပွီ။ ဒီကြောငျးတှေ ဘာကွောငျ့ မဖှငျ့တာပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: အခုအခြိနျထိတော့ အမရေိကနျတှဘေကျက ရှငျးရှငျးလငျးလငျး တောငျးဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ အမြိုးသမီးတှေ အခှငျ့အရေးနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး စိုးရိမျကွောငျးသာ ပွောထားတာပါ။ ကနြျောတို့ အနနေဲ့ ဒီအခှငျ့အရေးတှကေို လေးစားမယျဆိုတာကို သူတို့ကို အာမခံပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစ်စလာမျ စညျးမဉျြးတှေ၊ ဥပဒတှေ အရ သာ ဖွဈရပါမယျ။ အခုတော့ ကနြျောတို့ ဒီမူဝါဒကို ခမြှတျနပေါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ ကြောငျးမတကျရဘူးလို့ ကနြျောတို့ မပွောပါဘူး။ အစီအစဉျ တခု ခမြှတျနိုငျဖို့ တိုငျပငျနပွေီး အခြိနျတို အတှငျး ဒီကိစ်စဖွရှေငျးနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
AYESHA TANZEEM. ဒီအစီအစဉျကို ရှငျးပွလို့ ရမလား။ မိနျးကလေးတှေ အတှကျ ပညာရေး အစီအစဉျလား။ အခု အခွအေနနေဲ့ ဘာမြား ကှာခွားသှားမလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: လုပျနညျး လုပျဟနျ အပွောငျးအလဲဘဲ ဖွဈမှာပါ။ ခရီးသှားတာကနေ ကြောငျးသှား၊ အလုပျသှားတာ အပါအဝငျ အမြိုးသမီးတှကေို ဘယျလို ဘေးကငျးအောငျ ထားမလဲ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဘေးကငျးလုံခွုံပွီး စိတျ ကနြေပျမှု ရှိစဖေို့ အတှကျ ကြောငျးတှမှော စိတျခရြတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမြိုး ဖနျတီးပေးနိုငျရေး အတှကျ အစီအစဉျကို လုပျနတောပါ။
AYESHA TANZEEM. အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ အမြိုးသမီးတှေ အလုပျလုပျခှငျ့ ပေးမယျ ဒါပမေယျ့ အစ်စလာမျ ဥပဒေ အရ ဖွဈရမယျလုိ့ တာလီဘနျက ပွောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး အစ်စလာမ်မဈကို ဘယျလို အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့သလဲ ဆိုတဲ့ အပျေါမှာ အာဖဂနျ အမြိုးသမီးတှကွေားမှာ နားမလညျနိုငျ ဖွဈနကွေပါတယျ။ ဥပမာ ပွောရရငျ ကမြ ဒီမှာ တှဆေုံ့မေးမွနျးနတော အစ်စလာမ်မဈ ဖွဈတယျလို့ ထငျပါလား။
ZABIHULLAH MUJAHID: အမြိုးသမီးတှေ အတှကျ စညျးမဉျြးတှေ၊ ဘယျလို အလုပျလုပျကွမလဲ ဒါမှမဟုတျလညျး သူတို့ ဆကျလကျ ပညာသငျကွားရေး အတှကျ သငျကွားပေးဖို့က အစ်စလာမ်မဈ ဆရာတှကေ ဆုံးဖွတျရမှာပါ။ ဒီကိစ်စကို ဆရာတှေ စုစညျး တိုငျပငျတာကို ကနြျောတို့ စောငျ့ဆိုငျးနပေါတယျ။ ပွီးရငျတော့ သူတို့ ဆုံးဖွတျခကျြကို အစိုးရကို တငျပွမှာပါ။
AYESHA TANZEEM: ပညာတတျ အာဖဂနျ အမြားအပွားလညျး နိုငျငံကနေ ထှကျသှားကွပါပွီ။ နိုငျငံကို စီမံခနျ့ခှဲဖို့ အတှကျ အရညျအခငျြးပွညျ့သူ အလုံအလောကျ မရှိဘူးလို့လညျး တခြို့က ပွောပါတယျ။ ဒီကိစ်စ ဘယျလို လုပျမလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: အထူး ကြှမျးကငျြဖို့ လိုအပျတဲ့ ဌာနတှမှော အရညျအသှေးရှိ ပုဂ်ဂိုလျမြားကို ခနျ့အပျနိုငျရေး ကနြျောတို့ ကွိုစားနပေါတယျ။ ဥပမာ ပွောရရငျ ကနျြးမာရေးမှာဆိုရငျ ဆရာဝနျ တယောကျကို ဝနျကွီး ဖွဈစခေငျြပါတယျ။ ကုနျသှယျရေးမှာဆိုရငျ ကုနျသညျ တယောကျကို ဝနျကွီး ဖွဈစလေိုပါတယျ။ ဘဏျလုပျငနျးမှာဆိုရငျလညျး ဘဏျလုပျငနျးဆိုငျရာမှာ ပါရဂူဘှဲ့ရ တယောကျကို ဝနျကွီးဖွဈစခေငျြပါတယျ။ တခွား ဌာနတှေ အတှကျလညျး အလားတူ မြှျောမှနျးထားပါတယျ။ ဒီဌာနတှမှော အလုပျလုပျနသေူ အမြားစုက အရငျကတညျးက လုပျနကွေသူတှေ ဖွဈပါတယျ။
AYESHA TANZEEM. အာဖဂနျနစ်စတနျကိုလာပွီး ငှကွေေး ရငျးနှီးမွှပျနှံရေး တရုတျကို စိတျဝငျစားနတေယျလို့ ပွောပါတယျ။ တာလီဘနျတှေ အနတေဲ့ တရုတျကို ဘာတှေ လုပျစခေငျြပါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: တရုတျဟာ အိမျနီးခငျြး ဖွဈပွီး စီးပှားရေး အငျအားကောငျးပါတယျ။ သူတို့နဲ့ ကုနျသှယျရေး၊ စီးပှားရေး ဆကျဆံမှုကို တိုးမွှငျ့နိုငျရေး ကနြျောတို့ ကွိုစားနပေါတယျ။ တရုတျနဲ့ ကုနျသှယျရေး နဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံလိုနပေမေယျ့လညျး ကနြျောတို့ရဲ့ ပွညျတှငျးရေးမှာ ဝငျရောကျစှကျဖကျတာမြိုးကိုတော့ လကျခံမှာ မဟုတျပါဘူး။
AYESHA TANZEEM: တရုတျ သံတမနျတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဘကျက အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ ဘာတှေ လိုလားနပေါလဲ။ သူတို့က ဘာတှေ လိုခငျြနပေါလဲ။ အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ သူတို့ ဘာတှေ လုပျလိုနပေါလဲ။
ZABIHULLAH MUJAHID: ဒီမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှနေဲ့ သူတို့ အလုပျသမားတှေ အတှကျ လုံခွုံရေးကို သူတို့က လိုလားပါတယျ။ အာဖဂနျနစ်စတနျ နိုငျငံတှငျးက ကဏ်ဍ တခြို့မှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့ သူတို့ စိတျဝငျစားနပွေီး အသေးစိတျ ညှိနှိုငျး ဆှေးနှေးလိုနပေါတယျ။ ဒီစီမံကိနျးတှထေဲက တခုကတော့ Mes Aynak မှာ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ဘကျက ဒျေါလာ သနျးထောငျခြီ ရငျးနှီးမွှပျနှံလိုနတေဲ့ အရေးကွီးတဲ့ နယျပယျတှထေဲက တခုဖွဈပွီး အာဖဂနျနစ်စတနျ အတှကျလညျး လိုအပျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ရငျးနှီးမွှပျနှံမှုနဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှေ အတှကျ လုံခွုံရေးကို ကနြျောတို့ ကတိပွုထားပါတယျ။
ရှေးဟောငျး ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောတှေ တညျရှိရာ Mes Aynak သတ်တု တူးဖျောရေး လုပျကှကျကတော့ အာဖဂနျနစ်စတနျရဲ့ အကွီးဆုံး ကွေးနီ သတ်တု တူးဖျောရေး လုပျကှကျတှထေဲက တခု ဖွဈပါတယျ။ အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၁ ထရီလီယံ ကြျော တနျဖိုးရှိတဲ့ မတူးဖျောရေးသေးတဲ့ တှငျးထှကျ သတ်တု သယံဇာတ တှေ ရှိတယျလို့လညျး ယူဆထားကွပါတယျ။
တရုတ်နဲ့ပြုလုပ်မယ့် ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် EU ဆိုင်းငံ့
မြန်မာနိ်ုင်ငံတွင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တိုးချဲ့ဖို့ ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ကျော် သုံးမည် (M1 Group)
အာဆီယံ-တရုတ် လေကြောင်းပျံသန်းမှု ပူးပါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆွေးနွေး
အကြွေးပိနေတဲ့ တရုတ် Evergrande လုပ်ငန်းကြောင့် ကမ္ဘာတလွှား ရိုက်ခတ်သက်ရောက်နိုင်ခြေ